सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०२, २०७८ समय: ११:१६:२७
सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ । अझ टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नुभयो भने यसले रक्तसञ्चारलाई अझ नियन्त्रित गर्छ, जुन दीर्घकालिन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन ।
रातो दाग बस्छदाग बस्छ
ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नाले ब्राको इलास्टिक लाग्ने ठाउँको छाला रातो हुन्छ । गर्भवती अवस्था अथवा स्तनपान गराउने महिलाले भने खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ ।
राम्रो निन्द्रा लाग्दैन
शरीर पुरै ‘रिल्याक्स भयो भने मात्र गहिरोसँग निदाउन सक्छ । यसका लागि शरीरले खुकुलो महसुस गर्नुपर्छ, ताकि श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार दुवै निर्वाध रुपमा सञ्चालन होस । टाइट ब्रा लगाएर सुतेमा मीठो निन्द्रा पर्दैन । राम्रोसँग निदाउन चाहनेले भरिसक्के सुत्दा ब्रा फुकाल्ने अथवा लगाएमा पन कटनको लगाउने गर्नुपर्छ । पोलिस्टरको ब्रा सकेसम्म लगाउनुहुँदैन ।
थकान महसुस हुन्छ
सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । यसो हुँदा शरीरका कोषहरुमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र न्युट्रिएन्ट्स पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर गल्न पुग्छ ।
टाइट ब्रा लगाउर सुत्नाले स्तन सुनिने अथवा स्तनमा पानी जम्ने जस्ता गम्भीर समस्यासमेत उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन ।
गर्मीमा टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीको शरीरमा पसिना बढी आउँछ । त्यही भएर गर्मीमा ब्रा लगाएर सुत्नैपर्दा पनि खुकुलो कटनको ब्रा लगाउनुपर्छ ।
क्यान्सर हुन सक्छ
टाइट ब्रा लगाएर सुत्दाखेरि हुने सबैभन्दा खराब नतिजा भनेको क्यान्सर हो । टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीलाई स्तनको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाइसकेका छन । किनकि टाइट ब्राले छातीको भागमा रक्तसञ्चारलाई अवरुद्ध गर्छ, जसले गर्दा व्यक्ति क्यान्सरजस्तो रोगको शिकार हुने जोखिम बढ्छ । वर्षौसम्म टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीको स्तनमा गाँठा देखा पर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोसबैसाख ४ गतेको घटना हो यो। चितवन सारधानगर स्थित महानगरीय प्रहरीले काठमान्डौमा रहेको सबिता धिताल (भण्डारी)को माईतिलाई सम्पर्क गर्छ र सबिता धितालले केहि घण्टा अगाडि दे ह’त्या ग गरेको र मृ’तकको सव अस्पताल पुर्याइसकेकोले सकेसम्म छिटो सम्बन्धित अस्पतालमा आइ पुग्न आग्रह गर्छ। यता सविताको माईति परिवार स्त ब्ध बन्छ। माईति पक्षले सबिताको परिवारलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गर्छ तर सम्पर्कमा परिवार भित्रका सदस्य कोहि आउदैनन।
अन्तत: परिवार नजिकका आफन्तसंग सम्पर्क हुन्छ र सबिताको माईतिले कल्पना गर्नसम्म नसक्ने घ’टनालाई स्वी कार्न बा ध्य हुन्छ। केहि घण्टा भित्रै माईति पक्ष सम्बन्धित अस्पता पुग्छ जहा सबिताको सब पो’ष्ट म्या टमका निम्ति अस्पतालमा पुर्याइएको हुन्छ। सबिताको माईति पक्षका अनुसार, जहाँ प्र’हरीले उनीहरुलाई सबको फोटो खिच्न्न मात्र हैन, राम्रोसंग अन्तिम पल्ट हेर्न समेत दिएन भन्दै आमा रु’नु भयो।
उनको मृ’त्यु अगाडी उनले यस्ता केहि आधारहरु समेत छाडेकी छिन जसलाई प्रमाण मानेर हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनि माथि आफ्नै परिवारले मा’नसिक या,तना दिइरहेको थियो । परिवारमा स’सुराले धेरै या’ताना दिएपछि श्रीमानलाई भन्दा उनको कुरा सुनेका थिएनन। हेर्नुहोसयो
पनि पढ्नुहोस काठमाडौ । कुनै घटना यस्तो फिल्मी शैलीमा भइरहेका छन् की विश्वास नै गर्न सकिन्न । काठमाण्डौँमा केहि दिन अगाडी यस्तै घटना भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सुन्धारामा रहेको होटल प्रेसिडेन्टमा एक महिलाको लाश फेला पर्यो । तर घटना निक्कै शंकास्पद छ । विगत पन्ध्र महिनादेखि अस्ट्रेलियामा रहेको भनिएकी रजनी गुरुङको लाश होटलमा भेटिएको हो ।